Gazpacho nentim-paharazana - Resipe ho an'ny Thermomix | ThermoRecipes
lasopy3 minitraOlona 4
Inona no manomboka? ny hafananaManao ny gazpacho aho isaky ny faran'ny herinandro. Tena tianay mivady izany.
Talohan'ny fananako ny Thermomix® dia kamo be aho nanao azy io, satria tsy nandanja ireo akora ireo ary tsy nifanaraka tamiko tsara foana. Ankehitriny, ny mifanohitra amin'izay no izy, mifanaraka amiko foana izy ary vetivety dia vita.
Mangatsiaka be ary miaraka amin'ny ranomandry vitsivitsy, dia ny fomba itiavantsika azy indrindra. Afaka mankafy koa isika misy an'ireo kinova ao aminy izay manampy antsika hanana sakafo isan-karazany.
2 Ahoana ny fomba hahazoana ny endriny tonga lafatra?
Mora ny manamboatra azy fa tsy ho kamo ianao amin'ny fanomanana azy.
Fotoana manontolo: 3M
Voatabia mena sy masaka tena 1 k (na tavoahangy lehibe voatabia voajanahary 1 k)
80 g ny dipoavatra maitso
Tongolo 40 g
80-100 h ny kôkômbra voadio (ampiako 80 g)
Rano mangatsiaka 200g
Napetrakay tao anaty vera daholo ny legioma sy ny vinaingitra ary ny sira. Izahay dia manao fandaharana 30 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampio ny gilasy sy ny programa 2 minitra, amin'ny hafainganam-pandeha 10.
Ampianay ny menaka, apetrakay eo amin'ny toerany nikatona ny vera ary omeo tosika turbo mandritra ny iray segondra.
Ampiantsika ny rano ary afangaro 5 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 3.
Aroso miaraka amin'ny sombin-toast sy legioma mitovy amin'ilay nampiasainay ho tapatapaka kely.
Raha mampiasa maodely Thermomix® taloha ianao ary te hisoroka ny famafazana dia azonao atao ny mametraka ilay harona eo ambonin'ny sarony.
Ahoana ny fomba hahazoana ny endriny tonga lafatra?
Raha te hanana endrika tonga lafatra ho an'ny gazpacho ianao dia afaka mampiasa ireto fikafika roa ireto:
For a gazpacho misimisy kokoa: Mila manisy cubes ranomandry vitsivitsy fotsiny ianao ary rehefa mitsonika dia hamono azy bebe kokoa.
For a gazpacho matevina: Afaka manampy mofo 150 gr ianao ny andro teo aloha. Ampidiro amin'ny dingana 1 miaraka amin'ny legioma izy io mba hanampiana vatana ny lasopy mangatsiakao.
Fanazavana fanampiny - Gazety ivelany 9 hafahafa amin'ity fahavaratra ity
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Tsotra, Resipeo amin'ny fahavaratra, Lasopy sy menaka, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Lasopy sy menaka » gazpacho
Te hahafantatra amin'ny isan'ny vera gazpacho mivoaka izy satria any an-trano dia misy roa izahay. Mihazona tsara ve raha tazonina mandritra ny alina?
Misaotra tamin'ny resipeo.
Salama Manu, any an-trano ihany izahay mivady no mandray azy ary ny marina dia tao anatin'ny telo andro no nalainay izany. Tehiriziko ao anaty siny blender misy sarony visy (avy any Mercadona) izany ary hitazona ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny efatra andro. Ny marina dia rehefa mafana dia tsy maharitra amintsika.
Pili diaz dia hoy izy:
Tiako ny recette-n'i Elena, mbola tsy manao gazpacho izy any Avaratra, fa ho avy daholo ny zava-drehetra. Fanontaniana kely Mandra-pahoviana no azonao atao ao anaty vata fampangatsiahana? Mirary ny soa indrindra
Valiny amin'i Pili Diaz
Salama Pili, lazaiko aminao ny fomba fanaovana Manu, maharitra amin'ny toe-javatra tonga lafatra mandritra ny efatra andro ao anaty vata fampangatsiahana izy, rakotra tsara. Saingy, ny marina dia ao an-trano dia maharitra kely kokoa ny fotoana satria alaiko avy hatrany izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Nohararaotiko ilay resipeo gazpacho, nanontany anao aho raha azonao atao ny manome resep anay hanamboarana crème melon, izay efa nanandramako taloha ary tiako hatao ao an-trano foana ...
Salama Rocio. Izaho koa mitady resipeo tsara. Azoko antoka fa hataoko amin'ity faran'ny herinandro ity ary holazaiko anao.
Salama Elena, nanao gaspacho melon aho ary tena tsara izany, voatabia 1, dipoavatra maitso 1, tongolo 1, tongolo lay antsasaky ny melom, 800 grama, mofo 4 voadio, koba 2 hena, hena 16, menaka oliva 50 grama , Vinaingitra 20 grama, sira Pellisco. Ataovy tsy misy voa ary tsy misy hoditra ny melon, ampio ny tongolo lay, antsasaky ny dipoavatra, voatabia, chives, potika kely daholo ary potehina tsara daholo rehefa vita ny mofo. potipotehina kely, andrahoina mandritra ny 2 minitra miaraka amin'ny sira kely ny makamba, tapatapahana kely ny ham ary atao eo ambonin'ilay gaspacho miaraka amin'ireo makamba efa masaka.…
Salama Mari Carmen, misaotra betsaka tamin'ny resipeo. Hataoko ity gazpacho ity amin'izao andro izao satria tsy maintsy matsiro. Rehefa manao aho dia holazaiko aminao ny fomba. Raha ny fanazavana, avy any Cantabria aho. Mirary ny soa indrindra.
Stefi dia hoy izy:
Salama ry zazavavy, misaotra anao tamin'ity fomba fahandro ity, omaly no nanaovako azy ary nivoaka matsiro ilay gazpacho, zara raha manana ambiny ao anaty vata fampangatsiahana aho, ankehitriny fa ho avy ny andro tsara dia tena tadiaviko ary indrindra satria mahasalama tokoa. Te hiarahaba anao aho noho ity bilaogy mahafinaritra ity izay samy nanamboatra resipeo izaho sy ny reniko izay nanoro hevitra azy, izay tsara kokoa, ny andro hafa niara-nisakafo atoandro tao an-trano ny namana rehetra, nanomana ny mofon'ny Sôkôla 3 ary tian'izy rehetra izany, raha hiteny fa naverin'izy ireo aza.
Misaotra betsaka anao nizara ny resipeo, arahaba.
Mamaly an'i Stefi
Tena faly aho, Stefi!. Faly be izahay fa tianao ny resinay. Misaotra betsaka anao nahita anay! Mirary ny soa indrindra.
Miarahaba anao amin'ny gazpacho !!
Tena tsara ... nataoko omaly ho an'ny sakafo hariva sy mmmmm !!! Fa amin'ny manaraka dia hametraka kôkômbra bebe kokoa aho, satria tianay be izany ary tsy tsikaritra akory. Ahh sy izaho dia nanomana ilay kinova tamina voatabia voatoto voajanahary avy amin'ny vilany mmmmm, manome tsiro kely kokoa izy io.
Faly be aho fa tianao izany, Lidia!. Mirary ny soa indrindra.
Violet dia hoy izy:
Vao nanao an'ity recette ity aho ary tena tsara ilay tsirony, fa ny lesoka hitako dia hoe sendra tafintohina maro aho ary rehefa nataoko tamin'ny tanako dia tsy hitako izy ireo, tsy fantatro raha ilay fahadisoana no an'ny Mazava ho azy fa apetrako eo amboniny ny ranomandry, nolalovako ny dingana ary izany dia manampy azy hanorotoro kokoa.
Manantena aho ny manaraka. Vantany vao vitako izany, dia nihatsara aho nanomboka izao, mahatsiaro ho be dia be amin'ny hafanana ataoko.
Oroka lehibe ho antsika roa tonta ary manohy izany soa izany
Mamaly an'i Violet
Salama Violeta, rehefa manipy ny ranomandry isika dia potipotika amin'ny hafainganam-pandeha 10 ny zava-drehetra ary izany no tsy fisian'ny solafaka akory. Amin'ny fandisoana an'ity dingana ity dia tsy notapahinao io. Amin'ny manaraka dia ataovy izany rehefa avy amin'ny fomba fahandro, ho hitanao ny matsiro! Oroka.
Salama! misaotra noho ny zavatra rehetra ataonao, fanontaniana vaovao ... miambina ny voatabia ve ianao alohan'ny hametrahana azy? bsa
Salama Elena, manao volo amin'izy ireo aho, saingy tsy ilaina izany. Mirary ny soa indrindra.
Valerie dia hoy izy:
Voalohany, miarahaba anao amin'ny bilaoginao. Efa nanao resipeo maro aho ary nahomby. Tamin'io gazpacho io dia nanana olana aho satria nandritra ny 2 minitra tamin'ny hafainganam-pandeha 10 dia betsaka ny gazpacho no nivoaka hatraiza hatraiza, indrindra noho ny fifamatorana eo amin'ny sarony sy ny fingotra. Izy io dia be ranoka ka tsy nopotehina na aiza na aiza ary tsy maintsy naleoko fanindroany tamin'ny antsasaky ny gazpacho. Azo antoka fa voatabia 1 kg? Misaotra anao.
Valiny ho an'i Valerie
Salama Valerie, eny voatabia kg ary raha mivoaka amin'ny alàlan'ny fingotra dia satria efa omena kely ny azy dia mila manova azy ianao. Nitranga tamiko koa izany. Raha ny sombintsombiny sisa tavela dia ampy roa minitra ary potipotehina tanteraka ny zava-drehetra. Miarahaba ary faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Mª Angeles dia hoy izy:
Salama, efa ela aho no tsy nanoratra na inona na inona fa aza mieritreritra izany dia midika fa tsy nanao na inona na inona aho satria matsiro ny resinao. Eny, tsara ho ahy koa ny gazapacho fa manana olana aho fa ny zavatra rehetra dia mifono amin'ny sisin'ny sarom-baravarana ary mila mitazona ny sarom-bilany aho satria manandrana misokatra izy ary manao hadisoana ka tsy haiko izay mitranga satria Ampiako ny vola marina, tsy haiko raha misy lesoka na zavatra tsy haiko ny fonony, ho fantatrao ny fomba ilazana amiko hoe nahoana izany no mitranga, misaotra betsaka, nametraka ny very rehetra aho
Salama Mª. Angeles, heveriko fa efa malalaka ny fingotra ary tsy ara-dalàna ny hadisoana iray. Manao gazpacho aho isan-kerinandro ary tsy diso izany ary mitazona tsara ny sarony. Raha misy ranoka mivoaka avy amin'ny sarony dia tsy maintsy manova ny fingotra ianao. Mifandraisa amin'ny mpanolotra anao ary ampahafantaro azy. Mirary ny soa indrindra.
Pedroto dia hoy izy:
Miala tsiny, amin'ny maha Andaliana ahy dia tsy maintsy lazaiko fa tsy toy ny gazpacho Andalosiana tsara ity. Ranomandry sisa tavela, voatabia am-bifotsy ambiny, tsy misy mofo, ary be menaka sy tongolo lay.
Mamaly an'i Pedroto
Salama Pedroto, efa nanandrana fomba fijery tsy mitovy aho. Ny reniben'ny vadiko dia manao gazphac Extremadura izay matsiro. Ny zavatra tsara momba ny fomba fahandro dia ny ahafahantsika mampifanaraka azy ireo amin'ny zavatra tiantsika. Tsy tiako ny gazpachos misy mofo ary izany no antony anaovako izany, na inona na inona ataon'ny voalohany. Mirary ny soa indrindra.
Zazavavy mahafinaritra !!!! Vao avy nanao azy io aho izao mba hihinana ary ankoatry ny maha vaovao azy dia misy tsiro sy endriny …… Misaotra anao noho ny resinao !!!
Faly be aho fa tiako ianao, Lourdes!. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka amin'ity gazpacho ity !! tsara izany!! Tianay ny ranon-javatra betsaka kokoa noho izany ny rano bebe kokoa ary tsy misy mofo. tsara tokoa ny fahatsapany amin'izao andro mafana be izao. Oroka maro
Nahavita tsara tokoa ianao, nampifanaraka azy tamin'ny tsiro mahafinaritra anao! Azoko antoka fa tsara toy izany koa.
Nivoaka tsara ilay izy, tsy nasiako ranomandry na mofo fa napetrako tao anaty siny tao anaty vata fampangatsiahana ... ary mpidoroka! Etsy ankilany, nataoko tamina voatabia voatoto io satria tsy fantatro raha tokony hesorina ny voatabia voajanahary amin'ny hoditra sy ny masomboly ... holazainao amiko.
Miarahaba sy miarahaba anao amin'ireto resipeo ireto izay nivadika ho tsara foana!
Valiny tamin'i Cristina
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, Cristina. Azonao atao ny mametraka ny voatabia rehetra, voasasa tsara, satria potipotika tsara izy ireo.
Salama. Imbetsaka aho no nanao ny gazpacho nanaraka fomba fahandro hafa ary tsy nety tamiko izany. Androany dia nataoko tamin'ny anao ity ary nahafinaritra tokoa izany. Izany dia raha tsy nanampy kôkômbra aho satria tsy mety amiko. Ary nosoloiko ny dipoavatra maitso, izay tsy nananako, tamin'ny dipoavatra mena. Fantatro hoy aho.
Mena ihany koa io fa tsy voasary.
Misaotra tamin'ny resipeo sy amin'ny tranonkala amin'ny ankapobeny, tena tsara.
Ny marina dia miaraka amin'ny Thermomix ny fanaovana resipeo toy ireto dia mora be ary mivoaka tsara foana. Ny fanehoan-kevitra toa anao dia mamporisika anay hanohy hanao sy hamoaka fomba fahandro, misaotra betsaka!
Mariabringue dia hoy izy:
ilay oskua io !!!
Valiny ho an'i Mariabringue
Jan tsara! Ny marina dia manome ny fomba fahandro mahazatra isika ary, mazava ho azy, fa ny tsirairay dia mampifanaraka izany amin'ny zavatra tiany. Ohatra, efa manao ny mason-tsivana aho arakaraka izay ho laniko. Misaotra nanoratra taminay!
Nuria Ruano Bejarano dia hoy izy:
tena tsara gazpacho
Valiny tamin'i Nuria Ruano Bejarano
manankarena be. Ny marina dia tsy maintsy milaza aho fa tsy mifanaraka ny thermomix, nahazo fomba fahandro tena malemy aho, saingy matsiro ity gazpacho ity!
Antonia ruiz dia hoy izy:
Ny bilaogy. Ity mahafinaritra ity dia manaova resipeo maro eto .. misaotra
Valiny tamin'i Antonia ruiz
Misaotra anao Antonia tamin'ny fanarahana anay sy ny hafatrao. Famihinana 🙂
Xelo dia hoy izy:
Salama, misaotra an'ireo resipeo. Tsy zakako ny dipoavatra, maninona ny legioma hafa no azoko soloina?
Mamaly an'i Xelo
Ary maninona no tsy manao salmorejo izay manana ny voatabia ihany koa fa tsy misy dipoavatra?
Lasagna Zucchini miaraka amin'ny holatra sy saosy Aurora
Mofomamy fromazy feno krema